अनुष्काले खोलिन् विराटसँग विवाह गर्नुको रहस्य – Ramailo Sandesh
अनुष्काले खोलिन् विराटसँग विवाह गर्नुको रहस्य
एजेन्सी/बलिउडमा अत्यन्तै रुचाइएको चर्चित जोडी हो अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली । यो जोडीले लामो समय प्रेममा रहेर अचानक बिहे गरेका थिए । जति बेला दुवै जना करिअर बनाउने उत्कर्षमा थिए ।
जति बेला अनुष्का भर्खर २९ वर्षकी थिइन् । दुवैको विवाह भएको करिब डेढ वर्षपछि अनुष्काले चाँडै विवाह गर्नुको कारण खोलेकी छिन् । उनले भनेकी छन्:
‘मलाई प्रेम भएको थियो । हो, म उसलाई प्रेम गर्थेँ र अझै गर्छु । यसै कारण मैले चाँडो विवाह गरेँ ।’ अगाडी थपेकी छन् । ‘हाम्रा दर्शक हाम्रो उद्योगभन्दा माथि पुगिसकेका छन् । अब दर्शक कलाकारलाई मात्र पर्दामा देख्नमा रुचि राख्छन् । उनीहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर कुनै फरक पर्दैन ।’
अब कलाकारको विवाह भएको छ या छैन भनेर दर्शकले मतलब नै नगर्ने उनले बताइन् । फिल्म जिरोमा अभिनय गरेपछि पछिल्लो समय कुनै पनि फिल्ममा अभिनय गरेकी छैनन् । बलिउडमा उनले धेरै सफल फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् । र नायिका अनुष्काले केही महिना पहिला पहिलो सन्ताको रूपमा छोरीलाई जन्म दिएकी छिन् ।
०७७ साल चैत्र २९ गते आईतबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंहरूको भाग्यफल यस्तो छ…
नयाँ वर्ष २०७८मा सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्ने, यी राशीहरुलाई पर्नेछ नराम्रो प्रभाव
कोटेश्वरमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना !
ओठ सुक्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस
निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक लगायतलाई खुसीको खवर !
केही दिनमा नै पुरानो दादलाई चैट पार्ने चमत्कारिक घरेलु औषधीको बारेमा पढनुस
किन खराब हुन्छ तपाइँको पेट ? यी हुन् ५ कारण